I-manicure ebomvu, izithombe ezingu-100. Ngezipikili ezinde nezincane ukugcoba okukhanyayo
Ubuhle besifazane Ukugcoba nokuhamba ngezinyawo
I-manicure ekhanyayo yehlobo: akukho mithetho nemingcele
Ihlobo yisikhathi semibala ekhanyayo nokuvumela! Awucabangi ukuthi kuwufanelekile ukusebenzisa lokhu futhi ekugcineni unqume ngomuthi ogqamile? Emva kwakho konke, uma kungenjalo, njengoba kungenjalo ngesikhathi samaholidi, ungaphatha iminwe yakho nge-manicure yezimbali ezivuthiwe ezivuthiwe. Ake sikhulume ngendlela yokwenza umuthi oqhakazile ukuze kungabi ngesikhathi esifanayo ukungcola.
I-manicure ebomvu imininingwane ephathekayo yesithombe
Izindlela ezintsha zakamuva zokwakhiwa kwe-nail zisitshela ukuthi ukukhwabanisa kwakho okungavamile, ngakho-ke kuhamba phambili. Yiziphi izinhlobo zamasu ezingasetshenziswa njengamanje:
Yiziphi izinhlobo zamasu ezingasetshenziswa njengamanje:
Kodwa noma yikuphi okushoyo, ukugqoka kwezingubo zezinzipho zakho kuzodingeka kubonakale kuhle futhi kunambitheka. Uma ungenayo isikhathi sokwakha into enjalo, vele umboze i-marigold nge-neon shades, futhi uzobe usuvele usendaweni! Okuphuzi, okuluhlaza, okuluhlaza okwesibhakabhaka, obomvana, o-orange - wonke ama-lacquers onesitokisini angaya esikoleni. Ayikho imithetho, fantasize!
I-parade yemibono ye-manicure yehlobo ka-2015 yabona kule vidiyo:
I-manicure ebomvu ngezipikili ezide, isithombe
Ama-long marigolds amnandi ngoba afanelekile noma yikuphi ukugcoba komzimba:
Okokuqala, kukhona indawo ongayidlala kuyo
Okwesibili, iminwe ende ende ibukisa iminwe, yingakho kungesabi ukwesaba ukukhanya kwehlobo ehlobo kuzokwenza ukuba kube nzima futhi kube mfushane
Lapha ukukhwabanisa okunjalo okukhanyayo okunesithombe ngendlela yama-heroes anime kubonakala kungenangqondo futhi ngobuqotho, kodwa kuyoba nzima ukusebenzela imininingwane encane nokushintsha kwemibala njalo.
I-manicure ekhanyayo ayinakucabangeki ngaphandle kwama-rhinestones! Ngisho noma i-varnish i-monochrome noma i-bicolour, kodwa ukuyihlaziya ngephethini elikhazimulayo, uzothola ukubunjwa okugcinwe kahle futhi, ngesikhathi esifanayo, ukunikezela esixukwini.
Sizoxhuma i-varnish e-pink ne-pastes
Sithola lolu hlobo lokunethezeka kokusajingijolo kuma-marigolds
I-manicure ebomvu ngezipikili ezincane, isithombe
Naphezu kokuthi izipikili ezide ziyisiqhenya sokuziqhenya kuzo zonke izintombi, yizihluthulelo ezimfushane ezisefeshini okwamanje. Inkathi yezipikili ezinde isikhathi eside uye esikhathini esidlule, futhi izipikili zabo ezihle zingaziqhayisa ngambalwa. Ngakho-ke, ubude bemvelo bezipikili ngumkhuba ongahlali kodwa ujabule. Ake sibone ukuthi ukukhwabanisa okukhanyayo kwezipikili ezincane kubonakala kunhle kakhulu ehlobo.
I-gradient ngomunwe ngamunye iyinhlawulo ebushelelezi noma enezingqimba (njengokuthanda kwakho) ukugeleza kombala owodwa ube yinye. Ungakhetha hhayi kuphela i-ombre emibili yethoni (nalokhu kuthiwa lesi sitayela), kodwa futhi i-multicolored.
Inqubo yamanzi manicure ngenxa yenqubo eyinkimbinkimbi yokwenza indlu ayingakaze yande njengoba i-shadow, kodwa emasiloni isetshenziswa kaningi. Khetha imibala eminingi ekhanyayo bese uthola isikhala esingavamile emapeni akho!
Manje ama-swimsuits athandwayo adumile kakhulu: i-lemon, iluhlaza oluhlaza, i-orange, okusajingijolo, njll. Ngaphambi kokuphumula, siphakamisa ukuthi wenze i-aphoyintimenti nekhono lakho ukwenza umuthi ogqamile olwandle ngethoni ye-swimsuit.
Nayi inguqulo ye-manicure yezipikili ezincane izokwenza imizwa ehlobisa ngempela. Hlola ngokucophelela indlela yokudweba imininingwane.
I-bright manicure shellac, isithombe
I-Shellac ibaluleke ngokukhethekile ehlobo: izandla zakho eholidini zivame ukungena emanzini olwandle, futhi akusikho isikhathi sokugijima kuzungeze amashiloni e-resort. Okukhethwa kukho okungcono kune-gel-manicure evarnish ngeke uyithole. Uzohlala emavikini amathathu, ngaphandle kokuphazamisa inkosikazi yakhe ekuhlala okumnandi.
Ithiphu: uma uzenza u-shellac, khetha imibala ekhanyayo, kodwa ungakhamululi. Ukwenyuka okunjalo kuzokuhlala isikhathi eside, okusho ukuthi amasonto amabili ngeke uhlukaniswe naye imini nobusuku. Akulula kakhulu ukususa, futhi nakakhulu ukuze uzilungisele enye ingubo. Vumela ukukhanya kulesi simo kuhlanganiswe nezwe jikelele. Futhi ungahlaziya ikhabethe lakho futhi uthole umbala ovelele kuwo. Yilokho umthunzi oyisisekelo womunwe wakho okufanele ube khona.
Ukuzikhandla kwe-French ekhanyayo, isithombe
I-French manicure "ayiyona into engafanele": izandla zibukeka kahle, zihle futhi zihlotshiswe iphethini lemvelo. Enye into ukuthi akukhona kuphela ekusebenzeni ngezigaba zakudala.
I-manicure ekhanyayo yaseFrance, lapho umbala wenyama ugcinwa khona, futhi indawo emhlophe ithatha noma yimuphi omunye umbala wombala wamanzi, kuyoba yindlela enhle kakhulu ye "ofisi" yakho ehlobo: ukuqina kuyabonakala, futhi ihlobo lizwa.
"IsiFulentshi ngokuphambene" yilapho ukukhonkwane okungacabangi kukhonjiswa hhayi phezulu, kodwa phansi kwe-cuticle.
Uma ufuna ukudlala ngombala futhi ufeze umphumela ongalindelekile, faka kokubili imibala ye-Classic-French ene-shades emibili yombala owodwa okhanyayo.
Ukuzikhandla kwenyanga yomsindo: i-master-class enezinyathelo ezinyathelo ngezinyathelo
i-stencil ye-manicure yenyanga;
isisekelo esingenambala se-lacquer;
amabili noma iyiphi i-varnish ekhanyayo (umkhanyo owodwa emgodini, omunye umbala omnyama wombala oyinhloko).
Futhi manje senza isinyathelo ngesinyathelo:
Senza i-manicure, sifaka izipikili, sibanika indawo ephelele.
Gcwalisa ngokugcwele ipuleti yama-nail ne-varnish esemqoka.
Hlanganisa ama-stencil ngaphezu kwesisekelo ukuze i-varnish yomgodi ingagcini.
Sipenda isikhali se-nail.
Le vidiyo izokusiza ukuthi udale umuthi ophelele wenyanga.
Umgodi ungashiywa ungagciniwe.
Noma unike umthunzi okhanyayo kunengxenye enkulu ye-nail.
I-manicure ekhanyayo enezintambo, izithombe namavidiyo
Izindwangu zingashintsha iphethini eliyinkimbinkimbi ngezipikili, ngakho-ke zingasetshenziswa yibo abangenawo umdwebo wobuciko, kodwa bafuna ukugcina umuthi omuhle.
Amakhadi angafaka izimbobo ze-nail.
Futhi ungakwazi noma iyiphi iphethini.
Kodwa akubona wonke umuntu owazi ukuthi angalungisa kanjani izinsimbi ezikhonkwane. Ukuze ufunde ngale nqubo, siphakamisa ukubuka ekilasini eliyinhloko.
Indawo yombala: manicure yamanzi - umfashini wesimo-2016
Ukuphefumula kokushisa ehlobo lokushisa: imibono ye-manicure yesi-mint
Yikuphi ukugqoka okungcono: i-gel noma i-acrylic
Ukunakekela izandla nezinzipho ekhaya
Izandiso ze-Gel izipikili ekhaya
Imithetho yokunakekela izipikili
Izipikili ezenziwe ngefashini, Winter 2015 -2016: izithombe zezinketho eziningi zokwakheka kwe-nail, Autumn-Winter 2015-2016
I-cheeseki ye-ithanga ne-sinamoni
Indlela yokuhlanganisa imithi nemikhiqizo ndawonye?
U-Olga Buzova ucele izeluleko kubhalisile
Udlame olubhekiswe kwabesifazane njengenkinga yomphakathi
Kanjani ngokushesha ukukhipha utshwala emzimbeni?
Okroshka kumanzi we-kefir namaminerali
Ukwelashwa kwezinwele ngamakhambi
Kuhle kangakanani ukuchitha umshado?
Kufanele nginakekele kanjani izinwele ezisekhaleni?
Iyini iholide lesonto ngoFebhuwari 15? Ukunikezwa kweNkosi: amasiko, amasiko, izimpawu
U-Rosa Syabitova waqala ukukhuluma iqiniso ngomshado ongaphumeleli wendodakazi yakhe
U-Irina Grinyova waphenduka waba ngowesifazane oneminyaka engu-44 ubudala, isithombe
Ukuhamba ngokushesha ukulahlekelwa isisindo
I-cocktail yobisi ne-mango nesinamoni
Kungani uphupha ngomshado?
Ama-cookies amakhukhi nama-chips amakhokhethi